Ukubaleka kweZimbini-iiKhabhinethi ze-Ecotourism - I-Airbnb
Ukubaleka kweZimbini-iiKhabhinethi ze-Ecotourism
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguAlejandro
Yenzelwe ngokukhethekileyo ezimbini, hamba kwaye uqhawule, phila amava awodwa angqongwe yindalo.
Kwiikhabhinethi zeGadi ezintandathu unayo yonke into oyifunayo, ukongeza kwindawo yokuhlala sinendawo yokutyela isidlo sakusasa nesasemini, ichibi nokunye.
Ukuba sisiganeko esikhethekileyo sazise kwaye sinokulungiselela into kunye.
Umntu owongezelelweyo unexabiso le-150 yeedola ze-MXN, sinoomatrasi obongezelelweyo obuneflatable.
IiGadi ezintandathu yipaki ye-eco-tourism enekhabhathi, indawo yokutyela, ichibi kunye nokunye, ejikelezwe yindalo kwindawo epholileyo.
Imizuzu ye-50 ukusuka kwichweba laseVeracruz okanye kwisixeko saseXalapa, iPaso de Ovejas yidolophu ekhangayo njengokuba baninzi eMexico.
Igama layo libangelwa kukuba ngaphambili umlambo we-Atliyac wawuneendlela ezininzi zokudlula, phakathi kwazo iPaso Limón, iPaso Seco kunye nePaso de Ovejas, le yokugqibela yayiyindawo apho i-muleteers ye-altiplano ngokungadluleli kwi-Ofisi yoLawulo lwaseSpain, eyayiyi. indlu ka Los Portales, wahamba ngendlela bayiwelayo umlambo etempileni amancinci apho bahlala ngoxa wapakisha uboya ukuba iphononongwe kwaye emva koko ithunyelwe kwi-Port of Veracruz, ukuze uyilayishe kwi iinqanawa iSpanish.
Umlambo we-Atliyac wawunamaqula amaninzi, phakathi kwabanye i-Paso Limón kunye ne-Paso Seco, ebiza indlela endala ye-Paso de Ovejas, apho ama-stagecoaches awela kulo mlambo, njengezimvu zamaJesuit, abanini befama yase-Acazónica. Ngommiselo we-23 kaFebruwari, 1868, isihloko sedolophu sanikwa ibandla lePaso de Ovejas, elinegama elithi Zempoala de Paso de Ovejas. Ngommiselo we-26 ka-Okthobha ngo-1911, idolophu yasePaso de Ovejas iphakanyiselwe kudidi lwedolophu.
Ibekwe kumbindi welizwe kwindawo eyomileyo, kwizilungelelaniso ze-19 ° 17 "isibanzi somntla kunye ne-96 ° 26" yobude obusentshona, kumphakamo weemitha ezingama-40 ngaphezu komphakamo wolwandle. Imida kumntla-mpuma ngeLa Antigua, ukuya empuma kunye neVeracruz, ukuya kumzantsi-mpuma kunye neManlio Fabio Altamirano, ukuya emazantsi kunye neSoledad de Doblado, ukuya kumzantsi-ntshona kunye neComapa, ngasentshona nasemntla-ntshona kunye nePuente Nacional; umgama wayo oqikelelweyo kumzantsi-mpuma wekomkhulu lelizwe ngendlela yi-67 km.
Umbuki zindwendwe ngu- Alejandro
Siya kufumaneka kuwe ngalo lonke ixesha lokuhlala kwakho.